Hydrocele - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
” ဆရာရေ.. ကယျပါဦး..
ကြှနျတော့အဓိကနရောမှာ ပွသနာ ဖွဈနလေို့…
ရျော ..အဆနျးပါလား…ဘာကို ကယျရမှာတုနျး… ကိုဖိုးတုတျရ..”
နခေ့ငျး အေးအေးလူလူ ရှိတုနျး ဂယျြလီပူတငျးလေးနဲ့ ရနှေေးကွမျးလေးနဲ့နှပျမယျ ဆိုကာမှ…ရောကျခလြာတာ ကာလသားခေါငျး ဖိုးတုတျ ရယျပါ…
“ပွောစမျးပါဦး ခငျဗြားပွသနာ ..”
” အငျး..အဲ ” ကိုဖိုးတုတျတဈယောကျ ခေါငျးတကုတျကုတျနဲ့…
“အငျးအဲ မနနေဲ့.. လုပျဗြ ” ဆိုမှ….” ဒီလို ဆရာ….ကြှနျတေျာ့ရဲ့ ဟိုဟာ… ဝှေးစကေ့ အရမျးကွီးလာတယျ.. ကိုငျကွညျ့လိုကျတော့ အထဲမှာ အရညျတှလေိုလိုတှပေဲ ဆရာ.. ဖွဈတာက နညျးနညျးကွာပွီဆိုပမေယျ့…. ပွရမှာလဲ ရှကျတော့… လာမပွဖွဈတာ… ခု နရေထိုငျရခကျနဲ့ဆိုတော့.. ရှမေ့ကျြနှာ နောကျထားပွီး လာပွတာပါ..”
“ရျော… ကိုဖိုးတုတျနှယျ… ဒါမြိုးက ရှကျစရာလား ဗြ … ကိုယျ့ကနျြးမာရေး ကိုယျဂရုစိုကျရမှာပေါ့…” ဒီလိုနဲ့ ကိုဖိုးတုတျကို စမျးသပျကွညျ့လတေော့… သူပွောတဲ့ အဓိကမှာ ပွသနာ ဆိုတာက.. ကပ်ပါယျအိတျတှငျး အရညျတှေ တညျရာက ယောငျလာခွငျး (hydrocele ) ရယျပါ…
“ဒီလို ကိုဖိုးတုတျ.. ခငျဗြား ပွသနာက ကပ်ပါယျအိတျထဲ အရညျတညျတာပဲဗြ…”
” ဒီလို အရညျအိတျတညျတာက တဈနှဈအောကျကလေးတှမှောလညျး ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိတယျ.. ဒါပမေယျ့ တဈနှဈကြျောပွီး နောကျမှာတော့ ခန်ဓာကိုယျပွောငျးလဲမှုအရ တဖွညျးဖွညျး ပြောကျသှားတယျ..အဲ့လို မဟုတျပဲ ကနျြခဲ့ရငျတော့ ကလေးကို ဆရာဝနျနဲ့ သခြောပွသစဈဆေးရမယျ.. ”
” ကိုဖိုးတုတျကိစ်စကြ လူကွီးကိစ်စဆိုတော့ကာ ဒီလိုအရညျတညျတာက ကပ်ပါယျအိတျကို ထိခိုကျမိထားတာကွောငျ့ ဖွဈနိုငျသလို အတှငျးက ဝှေးစမှေ့ာ (သို့) ပွှနျလေးတှထေဲမှာ ပိုးဝငျတာ ၊ယောငျလာတာကွောငျ့ အရညျတှေ စုလာတာ ဖွဈနိုငျတယျပုံမှနျအားဖွငျ့ဒီလိုယောငျလာခွငျးဟာ နာကငျြခွငျးမရှိတဲ့အခါမှာတော့ ကုသမှုမြားမြားစားစား မလိုပါဘူး” ..”ခွောကျလ ပတျဝနျးကငျြလောကျမှာ သူ့အလိုလို ပြောကျကငျးသှားနိုငျပါတယျ” ဒါပမေယျ့ ဆရာဝနျကိုတော့ သခြောပွသသငျ့ပါတယျ…”
“မြားသော အားဖွငျ့ အရညျတှေ ပိုစုလာတာကွောငျ့ ကပ်ပါယျအိတျပိုလေးလာတဲ့အခါ နထေိုငျရ ပိုခကျလာမယျ၊ အရမျးကွီးလာတဲ့အခါမှာ နာကငျြတာတှေ ခံစားရတတျတယျဗြ…”
” စိုးရိမျရလား ဆရာ… ”
“ဒီလို အရညျအိတျတညျတာတှဟော သိပျတော့ မစိုးရိမျရဘူး.. ခငျဗြားရဲ့ မြိုးပှားမှု ပွသနာကို မထိခိုကျနိုငျဘူး”…ဆိုပမေယျ့.. နောကျမှာ ဖွဈလာနိုငျတာတှတေော့ ရှိတယျဗြ…
“အရညျအိတျတညျတာဟာ ပိုးတဈမြိုးမြိုးကွောငျ့ ဖွဈခဲ့မယျဆိုရငျ သုတျပိုးထုတျလုပျမှုတှေ၊ လုပျဆောငျမှုတှတေော့ လြော့ကသြှားနိုငျတယျဗြ…ဒါပွငျ ဒီလို အရညျအိတျဟာ လေးလံတာကွောငျ့.. ဝမျးဗိုကျတှငျးက ကွှကျသား အားနညျးတဲ့နရောကနေ.. အရညျအိတျထဲ အူတှေ ကလြာနိုငျတယျ.. အူကြှံနိုငျခွငျး (inguinal hernia ) ဆိုတာ ဖွဈနိုငျတယျ. ”
ဒါကွောငျ့ ဒီလို ပွသနာမြိုး ရှိလာနိုငျတဲ့အတှကျ သတိတော့ထားရမယျ.. ဒါပွငျ ရုတျတရကျ ကပ်ပါယျအိတျက အရမျးအောငျ့လာတာ၊ ယောငျလာတာ၊ နာရီအတျောကွာလာရငျတော့ ကုသမှု အမွနျခံယူရမယျဗြ..မဟုတျရငျ ဝှေးစကေို့ သှေးသယျဆောငျပေးတဲ့ ပွှနျဟာ လိမျသှား ပိတျသှားတဲ့အခါမှာ သှေးမရောကျတော့တာမြိုး ဖွဈနိုငျတယျ…
ဒီလို အခါမြိုးမှာတော့… aspiration လို့ချေါတဲ့ အထဲက အရညျကို စုပျထုတျရတာမြိုး… hydrocelectomy လို့ ချေါတဲ့ အသေးစားခှဲစိတျမှုမြိုး လုပျရတတျတယျ… ကုသမှုအပိုငျးကတော့ လူနာရဲ့အခွနေပေျေါမူတညျပွီး ကှဲပွားသှားနိုငျတယျ…”
ဒါကွောငျ့.. မောငျဖိုးတုတျရေ… ဒီကွားထဲကို ဆေးခနျးပုံမှနျတော့ လာပွ… မရှကျဖို့ မကွောကျဖို့လဲ မှာခငျြတယျ… စိုးရိမျစရာ ကွုံလာရငျလညျး အမွနျဆုံး သတိနဲ့ ဆေးရုံဆေးခနျး ပွသရမယျနျော..ကဲ ..ဒါဆို မောငျဖိုးတုတျရေ.. “အဓိက က အဓိက ” မို့ .. ကနျြးမာရေးလေးတော့ ဂရုစိုကျနျော…
ကိုဖိုးတုတျတဈယောကျ ခေါငျးတဗွဈဗွဈ ကုတျရငျး ထှကျသှားလရေဲ့ သူ့ခမြာလဲ .. ကာလသားခေါငျးဆိုတော့…ရပျရေးရှာရေးနဲ့ ဒုက်ခ… ” အျော … အဓိက အဓိက ”
ကနျြးမာ သနျစှမျး အဓိက ကတြဲ့ အမြိုးသားမြားဘဝကို ပိုငျဆိုငျကွပါစလေို့ တောငျးဆုမတ်ေတာပွုလကျြ
" ဆရာ​ရေ.. ကယ်​ပါဦး..
ကျွန်​​တော့အဓိက​နေရာမှာ ပြသနာ ဖြစ်​​နေလို့...
ရော်​ ..အဆန်းပါလား...ဘာကို ကယ်​ရမှာတုန်း... ကိုဖိုးတုတ်​ရ.."
​နေ့ခင်း ​အေး​အေးလူလူ ရှိတုန်း ဂျယ်​လီပူတင်း​လေးနဲ့ ​ရေ​နွေးကြမ်း​လေးနဲ့နှပ်​မယ်​​ ဆိုကာမှ...​ရောက်​ချလာတာ ကာလသား​ခေါင်း ဖိုး​တုတ်​ ရယ်​ပါ...
"​ပြောစမ်းပါဦး ခင်​​ဗျားပြသနာ .."
" အင်း..အဲ " ကိုဖိုးတုတ်​​တစ်​​ယောက်​ ​ခေါင်းတကုတ်​ကုတ်​နဲ့...
"အင်းအဲ မ​နေနဲ့.. လုပ်​​​ဗျ " ဆိုမှ...." ဒီလို ဆရာ....ကျွန်​​တော့်​ရဲ့ ဟိုဟာ... ​ဝှေး​စေ့​က အရမ်းကြီးလာတယ်​.. ကိုင်​ကြည့်​လိုက်​​တော့ ​အထဲမှာ အရည်​​တွေလိုလို​တွေပဲ ဆရာ.. ဖြစ်​တာက နည်းနည်းကြာပြီဆို​ပေမယ့်​.... ပြရမှာလဲ ရှက်​​တော့... လာမပြဖြစ်​တာ... ခု ​နေရထိုင်​ရခက်​နဲ့ဆို​တော့.. ​ရှေ့မျက်​နှာ ​နောက်​ထားပြီး လာပြတာပါ.."
"​ရော်​... ​ကိုဖိုးတုတ်​နှယ်​... ဒါမျိုးက ရှက်​စရာလား ​ဗျ ... ကိုယ့်​ကျန်းမာ​ရေး ကိုယ်​ဂရုစိုက်​ရမှာ​ပေါ့..." ဒီလိုနဲ့ ​ကိုဖိုးတုတ်​ကို စမ်းသပ်​ကြည့်​​လေ​တော့... သူ​ပြောတဲ့ အဓိကမှာ ပြသနာ ဆိုတာက.. ကပ္ပါယ်​အိတ်​တွင်း အရည်​​တွေ တည်​ရာက ​ယောင်​လာခြင်း (hydrocele ) ရယ်​ပါ...
"ဒီလို ​​ကိုဖိုးတုတ်​.. ခင်​​ဗျား ပြသနာက ကပ္ပါယ်​အိတ်​ထဲ အရည်​တည်​တာပဲဗျ..."
" ဒီလို အရည်​အိတ်​တည်​တာက တစ်​နှစ်​​အောက်​က​လေး​တွေမှာလည်း ဖြစ်​​လေ့ဖြစ်​ထရှိတယ်​.. ဒါ​ပေမယ့်​ တစ်​နှစ်​​ကျော်​ပြီး ​နောက်​မှာ​တော့ ခန္ဓာကိုယ်​​ပြောင်းလဲမှုအရ ​တဖြည်းဖြည်း ပျောက်​သွားတယ်​..အဲ့လို မဟုတ်​ပဲ ကျန်​ခဲ့ရင်​​တော့ က​လေးကို ဆရာဝန်​နဲ့ ​သေချာပြသစစ်​​ဆေးရမယ်​.. "
" ​ကိုဖိုးတုတ်​ကိစ္စကျ လူကြီးကိစ္စဆို​တော့ကာ ဒီလိုအရည်​တည်​တာက ​ကပ္ပါယ်​အိတ်​ကို ထိခိုက်​မိထားတာ​ကြောင့်​ ဖြစ်​နိုင်​သလို အတွင်းက ​ဝှေး​စေ့မှာ (သို့) ပြွန်​​လေး​တွေထဲမှာ ပိုးဝင်​တာ ၊ယောင်​လာတာ​ကြောင့်​ အရည်​​တွေ စုလာတာ ဖြစ်​နိုင်​တယ်ပုံမှန်​အားဖြင့်​ဒီလို​ယောင်​လာခြင်းဟာ နာကျင်​ခြင်းမရှိတဲ့အခါမှာ​တော့ ကုသမှုများများစားစား မလိုပါဘူး" .."​ခြောက်​လ ပတ်​ဝန်းကျင်​​လောက်​မှာ သူ့အလိုလို ​ပျောက်​ကင်းသွားနိုင်​ပါတယ်​" ဒါ​ပေမယ့်​ ဆရာဝန်​ကို​တော့ ​သေချာပြသသင့်​ပါတယ်​..."
"များ​သော အားဖြင့်​ အရည်​​တွေ ပိုစုလာ​တာ​ကြောင့်​ ကပ္ပါယ်​အိတ်​ပို​လေးလာတဲ့အခါ ​နေထိုင်​ရ ပိုခက်​လာမယ်​၊ အရမ်းကြီးလာတဲ့အခါမှာ နာကျင်​တာ​တွေ ခံစားရတတ်​တယ်​​ဗျ..."
" စိုးရိမ်​ရလား ဆရာ... "
"ဒီလို အရည်​အိတ်တည်​တာ​တွေဟာ သိပ်​​တော့ မစိုးရိမ်​ရ​ဘူး.. ခင်​​ဗျားရဲ့ မျိုးပွားမှု ပြသနာကို မထိခိုက်​နိုင်​ဘူး"...ဆို​ပေမယ့်​.. ​နောက်​မှာ ဖြစ်​လာနိုင်​တာ​တွေ​တော့ ရှိတယ်​​ဗျ...
"အရည်​အိတ်​တည်​တာဟာ ပိုးတစ်​မျိုးမျိုး​ကြောင့်​ ဖြစ်​ခဲ့မယ်​ဆိုရင်​ သုတ်​ပိုးထုတ်​လုပ်​မှု​တွေ၊ လုပ်​​ဆောင်​မှု​တွေ​တော့ ​လျော့ကျသွားနိုင်​တယ်​​ဗျ...ဒါပြင်​ ဒီလို အရည်​အိတ်​ဟာ ​လေးလံတာ​ကြောင့်​.. ဝမ်းဗိုက်​တွင်းက ကြွက်​သား အားနည်းတဲ့​နေရာက​နေ.. အရည်​အိတ်​ထဲ အူ​တွေ ​ကျလာနိုင်​တယ်​.. အူကျွံနိုင်​ခြင်း (inguinal hernia ) ဆိုတာ ဖြစ်​နိုင်​တယ်​​. "
ဒါ​ကြောင့်​ ဒီလို ပြသနာမျိုး ရှိလာနိုင်​တဲ့အတွက်​ သတိ​တော့ထားရမယ်​.. ဒါပြင်​ ရုတ်​တရက်​ ​ကပ္ပါယ်​အိတ်​က​ အရမ်း​အောင့်​လာတာ၊ ​ယောင်​လာတာ၊ နာရီအ​တော်​ကြာလာရင်​​​တော့ ကုသမှု အမြန်​ခံယူရမယ်​​ဗျ..မဟုတ်​ရင်​ ​ဝှေး​စေ့ကို ​​သွေးသယ်​​ဆောင်​​ပေးတဲ့ ပြွန်​ဟာ လိမ်​သွား ပိတ်​သွားတဲ့အခါမှာ သွေးမ​ရောက်​​တော့တာမျိုး ဖြစ်​နိုင်​တယ်​...
ဒီလို အခါမျိုးမှာ​တော့... aspiration ​လို့​ခေါ်တဲ့ အထဲက အရည်​ကို စုပ်​ထုတ်​ရတာမျိုး... hydrocelectomy လို့ ​ခေါ်တဲ့ အ​သေးစားခွဲစိတ်​မှုမျိုး လုပ်​ရတတ်​တယ်​... ကုသမှုအပိုင်းက​တော့ လူနာရဲ့အ​ခြေ​နေ​ပေါ်မူတည်​ပြီး ကွဲပြားသွားနိုင်​တယ်​..."
ဒါ​ကြောင့်​.. ​မောင်​ဖိုးတုတ်​​ရေ... ဒီကြားထဲကို ​ဆေးခန်းပုံမှန်​​တော့ လာပြ... မရှက်​ဖို့ မ​ကြောက်​ဖို့လဲ မှာချင်​တယ်​... စိုးရိမ်​စရာ ကြုံလာရင်​လည်း အမြန်​​ဆုံး သတိနဲ့ ​ဆေးရုံ​ဆေးခန်း ပြသရမယ်​​နော်​..ကဲ ..ဒါဆို ​မောင်​ဖိုးတုတ်​​ရေ.. "အဓိက က အဓိက " မို့ .. ကျန်းမာ​ရေး​လေး​တော့ ဂရုစိုက်​​နော်​...
ကိုဖိုးတုတ်​​တစ်​​ယောက်​ ​ခေါင်းတြ​​ဗစ်ြ​ဗစ်​ ကုတ်​ရင်း ထွက်​သွား​လေရဲ့ သူ့ ခမျာလဲ .. ကာလသား​ခေါင်းဆို​တော့...​ရပ်​​ရေးရွာ​ရေးနဲ့ ဒုက္ခ... " ​အော်​ ... အဓိက အဓိက "
ကျန်းမာ သန်​စွမ်း အဓိက ကျတဲ့ အမျိုးသားများဘဝကို ပိုင်​ဆိုင်​ကြပါ​စေလို့ ​တောင်းဆု​မေတ္တာပြုလျက်​
Does Metformin Causes Renal Injury